ကျွန်မသည် ဂျပန်စုပေါင်းဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသောမြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ | YOMOYAMA
ကျွန်မသည် ဂျပန်စုပေါင်းဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသောမြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မသည် ငယ်စဉ်ဘဝ၏ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဂျပန်တွင်နေထိုင်ရန် ဂျပန်တက္ကသိုလ်မှလက်ခံတတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ပုံပြင်ကိုစတင်ဖော်ပြဖို့ ကျွန်မသည် မြန်မာနိုင်ငံသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို မြတ်နိုးသည့်အပြင် အာရှတွင် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြင်တွေ့လေးစားရှိပါသည်။ သို့သော် ကျွန်မအတွက်သည် အာနီမဲ (anime) က ကျွန်မ၏ငယ်စဉ်ဘဝရဲ့ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ ကျွန်မကို တတ်နိုင်သမျှလုပ်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးစေခဲ့ပြီး ဂျပန်မှာ နေထိုင်မှုဘဝကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ဂျပန်၏ စုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုကို အလွယ်တကူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး မိမိ၏ဘဝကို အပြည့်အဝပျော်မွေ့နိုင်ပါသည်။ ယခုအခါမှာ ဂျပန်၌ကြုံတွေ့ရသောအတွေ့အကြုံများနှင့် ကျွန်မ၏နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံကြား တူညီမှုအကြောင်းကို ပြောဆိုပါမည်။
ကျွန်မသည် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံကို ဂျပန်ဘာသာစကားအပြောအဆိုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ ရောက်ရှိလာပြီး ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဒုက္ခများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်အဆောင်၌ နေထိုင်ခဲ့သောကတည်းက မိမိသိချင်လိုအပ်တဲ့အရာများနှင့် အသုံးဝင်သောဂျပန်စကားလုံးများကို သင်ပြပေးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတချို့ကို ပေါင်းသင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မအံ့ဩမိတာက သူတို့သည် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ကျွန်မကို နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် အရမ်းပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်မရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ပြုတ်ကျသွားသောအချိန်ရှိခဲ့ပြီး ထို့အချိန်တွင် ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ သူမစောင့်နေတဲ့ရထားကို လွတ်သွားရင်တောင် ပြန်လည်ကောက်ရရှိပြီး ကျွန်မကို ပေးအပ်၍ ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ စူပါမားကတ်တွင်လည်း ဂျပန်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ကိုယ်တိုင်ငွေရှင်းကောင်တာ (self-checkout) စက်များ မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို အချိန်များစွာပေးပြီး ရှင်းလင်းသင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကား အတွေ့အကြုံများရရှိပြီး ဤအတွေ့အကြုံများကိုလည်း နှလုံးသားထဲမှာ အစဉ်အမြဲရှိနေပါမည်။ ကျွန်မယုံကြည်သောတူညီချက်မှာ ကျွန်မ၏နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့၏နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှလူမျိုးများသည် သူစိမ်းများကိုပင် အရမ်းအထောက်အကူပေးပြီး အချင်းချင်းအပေါ် အလွန်ကြင်နာစွာဖြင့် ဆက်ဆံကြပါသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများသည် အခြားသူများအား မည်သည့်ပြဿနာများမဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပြီး စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများကိုလည်း အထူးပင်ဂရုတစိုက်သုံးကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်မကြီးပြင်းလာသောအခါ အခြားသူတို့၏ခံစားချက်တွေကို စဉ်းစားပေးဖို့နှင့် အညီ အခြားသူများနှင့် အတူ သဟဇာတဖြစ်အောင် အလုပ် လုပ်ရန် ကျွန်မ၏မိဘက သင်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကျွန်မ၏သူငယ်ချင်းသည် ကျွန်မ၏အိမ်စာကိုကူးယူလိုပါက ပဋ္ဌိပက္ခကို ရှောင်ရှား၍ ကျွန်မခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မ၏နိုင်ငံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတူညီသောဂျပန်နိုင်ငံ၌ နေထိုင်ခြင်းက ကျွန်မသည် အိမ်ကဲ့သို့ခံစားရစေပြီး ပိုမိုလုံခြုံစေသည် (ဂျပန်သည် မြန်မာထက် ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနည်းပါးသည်) အပြင် ပို၍အဆင်ပြေသည် (အဆင့်မြင့်စက်များနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) ဟု ထင်မှတ်ပါသည်။
ဂျပန်သည် စုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံး၍ ယဉ်ကျေးပြီးကြင်နာတတ်သောလူတို့ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနှင့် ဂျပန်တို့၏တူညီမှုကြောင့် ကျွန်မသည် အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့မှုမရှိဘဲ ဂျပန်၌နေထိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိခဲ့ပြီး အခြားဘယ်နေရာမှာမှ မရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ထားတာကို အံ့ဖွယ်သော အတွေ့အကြုံများ ရရှိပါသည်။
I amaBurmese who is currently studying business inaJapan university. I arrived Japan two years ago and during this period, I have fallen in love with Japan and its culture. My hobbies are shopping and travelling.
The Indian Origins of Naruto (Part.1)